देउवा ज्यू, देश दाऊमा नराखी राजनीति गर्न मिल्दैन ? – Nepal Press
देउवा ज्यू, देश दाऊमा नराखी राजनीति गर्न मिल्दैन ?
२०७८ वैशाख १० गते १५:४९
आदरणीय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ज्यू,
मलाई नेपालको नागरिक हुनुमा गर्व छ । प्राकृतिक छँटाले सुसज्जित, धार्मिक, साँस्कृतिक एवम् ऐतिहासिक धरोहरले सुसम्पन्न, विभिन्न, जात, भाषा, धर्म, सँस्कृति र मौलिक परम्पराले भरिपूर्ण देशको नागरिक गौरव महसुस नहुने कुरै भएन । हाम्रा पुर्खाको वीरताको गाथाले मन गद्गद् हुन्छ । बलभद्र कुँवर र भक्ति थापाले देशको रक्षार्थ लौरो टेकेर लडेको वीरताले छाती चौडा भएको महसुस हुन्छ । तर, देशको अहिलेको परिस्थिति, राजनीतिक दाउपेचले उठेको शीर निहुरिन्छ, छाती खुम्चन्छ ।
अझ देशमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेप र परनिर्भर नेताका कारण भोग्नु परेको सास्तीले मन चस्किन्छ । मुटु भकानिन्छ ।
कहिलेकाहीं हरेक राष्ट्रको जीवनमा अप्ठयारो आइलाग्छ । महासंकट आइलाग्छ, महासंकटबाट बँचेको समाजले नवीन सपना बुन्छ । संकटबाट पाठ सिक्दै देश बनाउने र बचाउने अर्जुनदृष्टि असल राजनेतामा हुनुपर्छ । राज्यको रुपान्तरण गर्नु, राज्यका नागरिकको सुखभोग, उन्नति, प्रगति, समुन्नती र समृद्धिको खाका कोर्नु असल राजनेताको पहिचान हो ।
हामी संगैका राष्ट्रहरुले उन्नतिको शिखर चुमिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति तपाईंको उमेर समूहका नेताले विश्वका धेरै देशमा धेरै प्रगति गरिसके । उनीहरु हाइहाइ भएका छन् । तर तपाईंलगायत हाम्रा शीर्ष नेता विदेशीको इसारामा नाच्नाले देश अहिले पनि यो गतिमा छ ।
पछिल्लो समय खुब चर्चामा छ, अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषय । यसबारे केही प्रश्न छन्, जुन म तपाईंलाई गर्न चाहन्छु ।
के हाम्रो देश एमसीसी नआएकै कारण पछि परेको हो ? हामीसंग यसबाकेह अरु विकल्प छैनन् ? हाम्रो प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगबाट हामी समृद्ध हुन सक्दैनौं । हाम्रो देश मरुभूमी हो ? मरुभूमीमा भएका देशहरुले त कति हो कति प्रगति गरिसके, हामी चाहिँ अमेरिक सहयोगबिना केही गर्नै नसक्ने भएका हौं ?
कुनैबेला चीन, सिङ्गापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र नेपालको अवस्था उस्तै थियो । तर, पछिल्लो आधा सताब्दीमै अरु देशहरुले विकास र समृद्धिको नयाँ उचाइ प्राप्त गरे । उनीहरुले चमत्कार गरे । तर, हामी अभावान फसिरह्यौं । किन यस्तो भयो ? यो सब हुनुमा कसको दोष छ ? कि भन्नुप¥यो –हाम्रो जमिनै खराब छ । या त हामी गरिब हुनका लागि श्रापित छौं । अन्यथा गडबडी कहाँ छ ?
मैले देखेको गडबडी राजनीतिमा छ । राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक संरचनामा र राजनीतिक नेतृत्वमा छ ।
शीर्ष नेताले एमसीसी लागू गर्न मरिहत्ते गरेको देखेर या त हामीसंग कुनै अन्य विकल्प नै छैन या त त्यहाँ नेताहरुको स्वार्थ लुकेको छ भन्नेमा शंका छैन । आफ्नै देशमा भएको बजेटको सदुपयोग गर्न नसक्ने, बजेटमाथि कुदृष्टि लाउने, भ्रष्टाचार गरेर काठमाण्डौंमा आलिशान महल बनाएर भारदारहरुलाईसम्म भ्याउने गरी नवउदीयमान धनाड्यका रुपमा उदाउनु पर्ने, आफ्नो देशको आर्थिक मितव्यीता र अनुशासन कायम गर्न नसक्ने अहिले आएर एमसीसी नभए ज्यानै फाल्नुपर्छ ?
एमसीसी संसदबाट पास गराउने पराधीन मानसिकताले कांग्रेसको आर्दश वाक्य ‘राष्ट्रियता’माथि नै प्रहार भएको छ । र, नेपाली कांग्रेस समग्र राष्ट्रको अहित हुने काममा लागिरहेकोप्रति गम्भीर चिन्ता लागिरहेको छ । एमसीसी सम्झौता गरी समृद्धिको सपना बुनेका थुप्रै राष्ट्रहरुको कहालीलाग्दो अवस्था हामीले देखिसकेका छौं । यो हाम्रो राष्ट्रको सर्वपक्षीय हितका लागि छैन, यो ठूलो धोका हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा १९३ देश सदस्य छन्, जसमध्ये ४८ देश गरिबको सूचीमा पर्छन् । हामी पनि त्यही सूचीमा छौं, जसले नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रको परिचय दिएको छ । सन् १९७१ को प्रकाशित सूचीमा रहेका थुप्रै राष्ट्रहरुले विकास र समृद्धिको उचाइ चढिसके तर हामी गरिबीको कुवामा फसेका छौं ।
विकसित राष्ट्रहरुले सिकाएको एउटै कुरा छ– विकासका लागि असाधारण प्रयत्न गर । सचेत मिसन र त्यसलाई सफल गर्ने परिणाममुखी लिडरसिप विकासका आधारस्तम्भ हुन् । ए.पी.जे. अब्दुल कलामका आशयमा देश बनाउने यस्तो सपना चाहिन्छ, जसले न नेताहरुलाई निदाउन दिनेछ, न त जनतालाई नै ।
नेता र जनताको सपना जुन दिन एउटै हुन्छ, त्यो दिन समृद्धिको यात्रालाई कसैले रोक्न सक्दैन । अहिले ठीकविपरीत भैरहेकोछ । नेता उत्तर, दक्षिण र युरोपको गहिरो प्रभावमा फसिरहँदा जनता निरीह बनेका छन् । जनतालाई नेपाली माटो सुहाउँदो विकास र समृद्धि चाहेको छ, नेता आफूलाई शक्ति राष्ट्रहरुबाट बच्ने ओखती चाहेको छ ।
जबसम्म विकास र समृद्धिको शिखर टेक्न राजनीतिक सुधार, रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी र आधारभूत सेवासुविधाको न्यायपूर्ण वितरण हुनैपर्छ । यस्तो स्थितिमा ५६ अर्बको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसनको अनुदान आएपनि देश समृद्ध बन्न सक्दैन ।
विकासको नियम हुन्छ, यो नियम अग्लो सिंढी जस्तै हो, टेक्ने ठाउँमा समात्यो भनेपनि लडिन्छ, समात्ने ठाउँमा टेके पनि लडिन्छ । त्यसैले ठीक ठाउँमा टेक्ने र ठीक ठाउँमा समात्ने अभ्यास तपाईंले गर्नुपर्छ । अहिले नेपाली काँग्रेसले समात्ने ठाउँ भनेको एमसीसी अनुदान होइन । अहिले समात्ने ठाँउ भनेको नेपालको जल, जमिन र जंगलबाटै समृद्धिको खाका कोर्नु हाम्रो उत्तम बाटो हो ।
हामीसंग थुप्रै सम्भावनाहरु छन् । जस्तो फिजी जस्तो सानो देशले उच्च कोटीको ‘फिजी वाटर’ उत्पादन गरेर उच्च मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ । फिजी राष्ट्रले आफ्नो समृद्धि फिजी वाटरमा देख्यो । हामीले हाम्रा हिमालहरुबाट बग्ने कञ्चन पानीको बान्डिङ ‘सागरमाथा वाटर’ गर्न सक्यो भने पनि समृद्धि आउनसक्थ्यो ।
सागरमाथाले हाम्रो देशको पहिचान उच्च बनाइरहँदा विश्व बजारमा ‘सगरमाथा वाटर’ उच्चमूल्यमा बिक्रि गर्न लाग्दा हाम्रो शान पनि उँचो हुने थियो ।
यस्तै हामीसंग लुकेका स–साना कुराले देशले समृद्धिको उचाइ समात्न सक्छ । पर्यापर्यटन, उत्पादनशील उद्योगको पुनर्जागरण, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सक्यौं भने मुलुक समृद्ध बन्न धेरै समय लाग्दैन । मुख्य कुरा स्रोत परिचालन, सुशासन र सामाजिक न्यायको हो ।
बेलायत र फ्रान्सबीच भएका युद्धले युरोप तहसनहस पारेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध पहिलोभन्दा अझ भयङ्कर थियो । आफ्ना कयौं प्रियजनहरु गुमाएको युरोपले शोकलाई शक्तिमा बदल्यो र समृद्धि खोज्यो । युरोपको समृद्धि रगत र आसुको पोखरीमा फुलेको कमल जस्तै हो ।
इतिहासमा हामीले पनि निकै रगत र आँशु बगायौं तर हाम्रो पोखरीमा कमल किन फुल्न सकेन ? किन समृद्धिको चाहना पूरा हुन सकेन ? यी तमाम प्रश्नहरु नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेतृत्वहरुसंग रहिआएको छ ।
एसीयामा जपान सवैभन्दा कमजोर प्राकृतिक स्रोतसाधन भएको देश हो तर जापानले उच्च समृद्धि हासिल गरिसयो । हामीसंग एसीयामा सवैभन्दा बढी स्रोत र साधनहरु छन् तर हामी गरिब छौं । कुनै बेला हाम्रो निर्यात अब्बल थियो । तर, अहिले कमजोर छ । यो सवथोक गर्न असल राजनीति चाहिन्छ, मानवस्रोत र असल व्यवस्थापन चाहिन्छ । यो सबै परिचालन गर्न असल नेता चाहिन्छ । किन यति गर्न सक्ने नेता तपाईं हुनु भएन ? कांग्रेसमा भएनन् ? अहिले किन एससीसीको साहना खोज्नुपर्यो ? निर्मम समीक्षा जरुरी छ ।
कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले चौतर्फी निराशा छाएको छ, देशमा अन्याय अत्याचार बढेको छ, देशमा न्याय मरेको छ, जताततै भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ, आर्थिक रुपमा संकट चुलिएको छ, आम नागरिकमा निराशा छाएको छ ।
देशमा हरेक प्रकारले संकट होइन महासंकट चुलिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा आएको उतारचढावले महासंकट चुलिएको छ । यो महासंकटका बेला नवीनतम सपना बुनेर समग्र राष्ट्रहितको लागि तपाईको दृढ संकल्प, चट्टानी अडान, राजनैतिक रुपमा निष्ठा र इमान्दारीताको खाँचो छ । त्यसैले राष्ट्रघाती एमसीसीको पक्षमा होइन, नेपाल र नेपालीको हितमा सोच्न आग्रह गर्दछु ।
(लेखक नेपाल तरुण दल बैतडीका उपाध्यक्ष हुन्)
प्रकाशित: २०७८ वैशाख १० गते १५:४९